လက်ရှ် ရပ်ရ်ှဖို့ ရဲ့ ပြသနာ တစ်ခုနဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် အတွက် ဘယ်သူ ပိုပြီး အဆင်ပြေ နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကို ပြောကြား သွားတဲ့ #ရွိုင်ကိန်း - SPORTS MYANMAR
လက်ရှ် ရပ်ရ်ှဖို့ ရဲ့ ပြသနာ တစ်ခုနဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် အတွက် ဘယ်သူ ပိုပြီး အဆင်ပြေ နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကို ပြောကြား သွားတဲ့ #ရွိုင်ကိန်း
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ရွိုင်ကိန်း က လက်ရှိ အသင်း ရဲ့ အဓိက တိုက်စစ် မှူး တစ်ဦး ဖြစ်နိုင် ရေး ဆိုတာ မားကပ်စ် ရပ်ရ်ှဖို့ အပေါ် မှာသာ မူတည် ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေ အပြောင်း အရွှေ့ တုန်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း မှ တိုက်စစ်မှူး ရိုမီလူ လူကာကူ ထွက်ခွာ သွားတဲ့ အတွက် ပရိသတ် အများစု က ရပ်ရ်ှဖို့ ကို အဓိက တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်လာ ဖို့ အတွက် အထူး မျှော်လင့်ချက် ထားရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒီလို မျှော်လင့် ရခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်း အရင်း က အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ဆိုးလ်ရှား လက်အောက် မှာ အဓိက တိုက်စစ်မှူး အဖြစ် ကစားခဲ့ ရလို့ ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ဘောလုံး ရာသီ မှာတော့ ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေ့ကြုံ ခြင်း မရှိ သေးတဲ့ အချိန် ကာလ တစ်ခု အထိ ဆိုးလ်ရှား ဟာ အခြား လူငယ် တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အန်သိုနီ မာရှယ် ကိုသာ အဓိက တိုက်စစ်မှူး အဖြစ် အသုံးပြု ထားခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် ရော အင်္ဂလန် တို့ ဘူလ်ဂေးရီးယား ကို4–0နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာပါ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး အဖြစ် သာ ပါဝင် ကစား ပေးခွင့် ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
အခုတော့ ယူနိုက်တက် ဂန္ဓဝင် ရွိုင်ကိန်း က လက်ရှိ ရပ်ရ်ှဖို့ ကစား နေရ တဲ့ နေရာ တွေနဲ့ ပတ်သက် လို့ သူ့ရဲ့ အမြင် တွေကို သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ရပ်ရ်ှဖို့ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့် မှာ ရှိတဲ့ ပြသနာ တစ်ခု က လူငယ် ကစားသမား အနေ နဲ့ အဓိက ကစား လိုတဲ့ နေရာ တစ်ခု နဲ့ အခြား နေရာ တွေမှာ ပါ ဘယ်လို ကစား ရ မလဲ ဆိုတာ ကို လေ့လာ သင့်တယ် ဆိုတာ ပါပဲ ။ သူ အခု သိရှိ ထားရ မှာက သူဟာ အခု ထက်ထိ အဲ့တာ တွေမှာ အထူး ကျွမ်းကျင် မှု မရှိ သေးတာ ပါပဲ ”
” ရပ်ရ်ှဖို့ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် တို့ အဲ့တာ စိုးရိမ် မိကြ ပါတယ် ” လို့ ရွိုင်ကိန်း က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ မာ့ခ် ပုဂတ်ခ်ျ က လက်ရှိ ရပ်ရ်ှဖို့ရဲ့ ယူနိုက်တက်မှာ ရှိတဲ့ အနေအထားက ကစား သမား ကို ထိခိုက် စေနိုင် မလား လို့ ရွိုင်ကိန်း ကို ဆက်လက် မေးမြန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” လက်ရှိ အသင်း ရဲ့ အနေအထား အရ သူဟာ မာရှယ် ထက် ပိုပြီး အထောင် တိုက်စစ် နေရာ မှာ ကစား ခွင့် ရရှိ သင့်တယ် လို့ ခင်ဗျား ထင် သလား ? ”
” ကျွန်တော် ဆိုလို တာက အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်း မှာ ဆိုရင် ရပ်ရ်ှဖို့ အနေ နဲ့ အထောင် တိုက်စစ် နေရာ အတွက် ကိန်း နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲလှ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာ က သူ့ကို ထိခိုက် စေနိုင် မလား ? အခု အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာရော ဘာတွေ ဖြစ်နေ တာလဲ ? ” လို့ ပုဂတ်ခ်ျ က ရွိုင်ကိန်း ကို မေးမြန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ မေးခွန်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုးလ်ရှား က အသင်း ရဲ့ နံပါတ်9ကစားသမား ဖြစ်နိုင် ဖို့ အတွက် ရပ်ရ်ှဖို့ အနေ နဲ့ ဆိုးလ်ရှား ကိုသာ သက်သေ ပြရ မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒါဟာ ကစား သမား အပေါ် မှာပဲ အဓိက မူတည်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကစားသမား အပေါ် မှာပဲ မူတည် ပါတယ် ။ သူ့ အနေနဲ့ ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ ပြသရင်း ဆိုးလ်ရှား ကို ဖိအား တွေ ပေးပြီး ‘ ကျွန်တော် တိုက်စစ် နေရာ မှာ ကစား ချင်တယ် ‘ လို့ ပြောလို့ ရ ပါတယ် ။ သူတို့ လူကာကူ ကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီ လေ ။ ဒါ့ကြောင့် ဆိုးလ်ရှား ကို သူဟာ တိုက်စစ် နေရာ အတွက် ခေါင်းခဲ စရာ ကိစ္စ တွေ ပေးနိုင် ခွင့် ရှိနေ ပါတယ် ”
” အကယ်လို့ ကစားသမား နှစ်ဦး အကြား နှိုင်းယှဉ် စေမယ် ဆိုရင် သူဟာ မာရှယ် ထက် ဂိုးတွေ ပိုမို သွင်းယူ ပေးနိုင် လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်မှတ် ပါတယ် ” လို့ ရွိုင်ကိန်း က သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
လကျရျှ ရပျရျှဖို့ ရဲ့ ပွသနာ တဈခုနဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ အတှကျ ဘယျသူ ပိုပွီး အဆငျပွေ နိုငျမလဲ ဆိုတာတှကေို ပွောကွား သှားတဲ့ #ရှိုငျကိနျး
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ရှိုငျကိနျး က လကျရှိ အသငျး ရဲ့ အဓိက တိုကျစဈ မှူး တဈဦး ဖွဈနိုငျ ရေး ဆိုတာ မားကပျဈ ရပျရျှဖို့ အပျေါ မှာသာ မူတညျ ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ နှေ အပွောငျး အရှေ့ တုနျးက မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှ တိုကျစဈမှူး ရိုမီလူ လူကာကူ ထှကျခှာ သှားတဲ့ အတှကျ ပရိသတျ အမြားစု က ရပျရျှဖို့ ကို အဓိက တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈလာ ဖို့ အတှကျ အထူး မြှျောလငျ့ခကျြ ထားရှိ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒီလို မြှျောလငျ့ ရခွငျး ရဲ့ အဓိက အကွောငျး အရငျး က အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုနျးက ဆိုးလျရှား လကျအောကျ မှာ အဓိက တိုကျစဈမှူး အဖွဈ ကစားခဲ့ ရလို့ ပါပဲ ။
ဒါပမေယျ့ လကျရှိ ဘောလုံး ရာသီ မှာတော့ ဒဏျရာ ပွသနာ တှကွေုံ့ ခွငျး မရှိ သေးတဲ့ အခြိနျ ကာလ တဈခု အထိ ဆိုးလျရှား ဟာ အခွား လူငယျ တိုကျစဈ ကစားသမား တဈဦး ဖွဈတဲ့ အနျသိုနီ မာရှယျ ကိုသာ အဓိက တိုကျစဈမှူး အဖွဈ အသုံးပွု ထားခဲ့ ပါတယျ ။
အခွား တဈဖကျ မှာတော့ ရပျရျှဖို့ ဟာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ ရော အင်ျဂလနျ တို့ ဘူလျဂေးရီးယား ကို4–0နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ မှာပါ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား တဈဦး အဖွဈ သာ ပါဝငျ ကစား ပေးခှငျ့ ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယျ ။
အခုတော့ ယူနိုကျတကျ ဂန်ဓဝငျ ရှိုငျကိနျး က လကျရှိ ရပျရျှဖို့ ကစား နရေ တဲ့ နရော တှနေဲ့ ပတျသကျ လို့ သူ့ရဲ့ အမွငျ တှကေို သုံးသပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ရပျရျှဖို့ နဲ့ ပတျသကျလို့ ကြှနျတေျာ့ မှာ ရှိတဲ့ ပွသနာ တဈခု က လူငယျ ကစားသမား အနေ နဲ့ အဓိက ကစား လိုတဲ့ နရော တဈခု နဲ့ အခွား နရော တှမှော ပါ ဘယျလို ကစား ရ မလဲ ဆိုတာ ကို လလေ့ာ သငျ့တယျ ဆိုတာ ပါပဲ ။ သူ အခု သိရှိ ထားရ မှာက သူဟာ အခု ထကျထိ အဲ့တာ တှမှော အထူး ကြှမျးကငျြ မှု မရှိ သေးတာ ပါပဲ ”
” ရပျရျှဖို့ နဲ့ ပတျသကျလို့ ကြှနျတျော တို့ အဲ့တာ စိုးရိမျ မိကွ ပါတယျ ” လို့ ရှိုငျကိနျး က ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျပါတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျ အစီအစဉျ တငျဆကျသူ မာ့ချ ပုဂတျချြ က လကျရှိ ရပျရျှဖို့ရဲ့ ယူနိုကျတကျမှာ ရှိတဲ့ အနအေထားက ကစား သမား ကို ထိခိုကျ စနေိုငျ မလား လို့ ရှိုငျကိနျး ကို ဆကျလကျ မေးမွနျး သှားခဲ့ ပါတယျ ။
” လကျရှိ အသငျး ရဲ့ အနအေထား အရ သူဟာ မာရှယျ ထကျ ပိုပွီး အထောငျ တိုကျစဈ နရော မှာ ကစား ခှငျ့ ရရှိ သငျ့တယျ လို့ ခငျဗြား ထငျ သလား ? ”
” ကြှနျတျော ဆိုလို တာက အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ အသငျး မှာ ဆိုရငျ ရပျရျှဖို့ အနေ နဲ့ အထောငျ တိုကျစဈ နရော အတှကျ ကိနျး နဲ့ ယှဉျပွိုငျ ရဖို့ ဆိုတာ ခကျခဲလှ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့တာ က သူ့ကို ထိခိုကျ စနေိုငျ မလား ? အခု အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာရော ဘာတှေ ဖွဈနေ တာလဲ ? ” လို့ ပုဂတျချြ က ရှိုငျကိနျး ကို မေးမွနျး သှားခဲ့ ပါတယျ ။
အဆိုပါ မေးခှနျး နဲ့ ပတျသကျလို့ ဆိုးလျရှား က အသငျး ရဲ့ နံပါတျ9ကစားသမား ဖွဈနိုငျ ဖို့ အတှကျ ရပျရျှဖို့ အနေ နဲ့ ဆိုးလျရှား ကိုသာ သကျသေ ပွရ မှာ ဖွဈကွောငျး ၊ ဒါဟာ ကစား သမား အပျေါ မှာပဲ အဓိက မူတညျကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ဖွဈနိုငျခွေ ရှိ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ကစားသမား အပျေါ မှာပဲ မူတညျ ပါတယျ ။ သူ့ အနနေဲ့ ခွစှေမျး ကောငျးတှေ ပွသရငျး ဆိုးလျရှား ကို ဖိအား တှေ ပေးပွီး ‘ ကြှနျတျော တိုကျစဈ နရော မှာ ကစား ခငျြတယျ ‘ လို့ ပွောလို့ ရ ပါတယျ ။ သူတို့ လူကာကူ ကို ရောငျးခြ ခဲ့ပွီ လေ ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆိုးလျရှား ကို သူဟာ တိုကျစဈ နရော အတှကျ ခေါငျးခဲ စရာ ကိစ်စ တှေ ပေးနိုငျ ခှငျ့ ရှိနေ ပါတယျ ”
” အကယျလို့ ကစားသမား နှဈဦး အကွား နှိုငျးယှဉျ စမေယျ ဆိုရငျ သူဟာ မာရှယျ ထကျ ဂိုးတှေ ပိုမို သှငျးယူ ပေးနိုငျ လိမျ့မယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျမှတျ ပါတယျ ” လို့ ရှိုငျကိနျး က သုံးသပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။